Robert Mugabe oo 93 jirsaday sheegayna inuusan xukunka ka degeyn. – STAR FM SOMALIA
Robert Mugabe oo 93 jirsaday sheegayna inuusan xukunka ka degeyn.
Madxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo u dabaaldegay sanadguurada dhalashadiisa ee 93aad ayaa u sheegay dadkii ka soo qeybgalay xaflad lagu qabtay Matabeleland inuusan ka degeyn xukunka dalkiisa.
Xaflada dhalashada Mugabe oo ka hooseysay kuwii hore uu u qaban jirey ayaa isagoo xiran Jaakad madow oo sawirkiisu ku xardhan yahay waxa uu jeediyay qudbad socotay muddo saacad ah.
Madaxweynaha ugu da’ada weyn caalamka Mugabe ayaa ka sheegay xafladan in uusan ka degeyn madaxtinimada dalkiisa inta uu nool yahay.
“Dadka ku mashquulsan kooxeysi ee dhahaya ‘Mugaba ha baxo’ waxaan isweydiiyaa halkee ayaan aadaa?”ayuu yiri Mugabe oo 37 sano xukumayay dalkiisa.
Robert Mugabe ayaa sheegay in qofkii bedeli lahaa uusan isagu soo xuleyn taasna ay tahay mid nacasnimo ah.“Dadka waxa ay leeyihiin dooro qofkii ku bedeli lahaa kahor inta aadan howlgab noqon,taasi sow ma ahan nacasnimo? In aan qof xisbiga ka tirsan magacaabo. Maya ma doonayo.”ayuu yiri.
“Ma aha mid marwalba ay sahlan tahay in la saadaaliyo, adigoo sanadkan nool, ayaa sanadka soo socda sii noolaan kartaa.”
“Kuma xirna sida uu caafimaadkaagu yahay waxaa ay tahay in go’aanka noloshaadu ay tahay mid ku xiran Alle.”ayuu yiri Mugabe.
Martidii ka qeybgashay xaflada ayaa waxaa loo keenay doolsho culeyskiisu yahay 93 sano iyadoo dad badan ay ka soo lugeeyeen tuulooyinka ku dhow dhow halka ay xafladu ka dhacaysay, waxaana la sheegay in qaarkood ay ka soo gudbeen wabi.
Xafladan ayaa lagu qarash gareeyay boqolaal ku oo dollar waxaana taas dhaliilay dadka ka soo horjeeda Madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe.
In ka badan 30 ruux oo lagu dilay weerar lagu qaaday Isbitaal ku yaal Kabul(Daawo Sawiro)
Turkiga oo ku hanjabay inuu ka baxayo heshiiska qaxootiga ee Midowga Yurub